१७ लाखको कल्भर्ट सात दिनमा बन्यो ९ दिनपछि भत्कियो | DNFMEDIA
१७ लाखको कल्भर्ट सात दिनमा बन्यो ९ दिनपछि भत्कियो
उर्लाबारी । सधैं सुशासनका भाषण गरेर नथाक्ने उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागोले योजना सम्पन्न नगरीकन रकम निकासा गरिदिएको खुलासा भएको छ । मोरङको उर्लाबारी–१ मेचेडाँगीमा निर्माण भएको कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न नभई गत असार २४ गते आएको बाढीले भत्कायो । असार ७ गते सम्झौता भएर १५ गते निर्माण सम्पन्न भएको कल्भर्ट गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर बनाएको स्थानीयको भनाई छ ।
उता सोही वडाको हिले डाँगीमा निर्माण भएको अर्को कल्भर्ट निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किएको छ । मध्यवर्खामा छिटो छिटो काम गर्दै बजेट सक्ने परिपाटीले उर्लाबारीका अधिकांश योजना सम्पन्न हुन नसकेको उप प्रमुख भण्डारीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो–धेरै जसो योजनाको म्याद असोज मसान्त सम्म थपिएको छ । अनुगमन गरेर भएको कामको मात्र पैसा दिएका छौं उहाँले भन्नुभयो । गत आर्थिक वर्षमा नगरको गौरवको आयोजना भनेर घोषणा गरिएका दुई वटै आयोजनाको काम सुरु सम्म हुन सकेन । नगरमा जताततै नीतिगत भ्रष्चार छ । अनि मेयर भन्छन्–म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिने छैन ? काम नै सम्पन्न नगरि अग्रीम पैसा भुक्तान दिनु भ्रष्टाचार हो कि होइन मेयर साव ?
Previous: गान्धी स्कुलको आन्दोलन थप कडा बन्दै
Next: सुरजवीर बज्राचार्यको नयाँ गीत ‘हाकुमैंचा’ सार्वजनिक (भीडियो सहित)